Manicure set - Chii chimwe nechimwe chinhu chei? | Bezzia
Susana godoy | 20/06/2022 10:06 | Runako
Tinoda kuita kuti maoko edu agare akashambidzika, nekuti ivo vanowanzotaura zvakawanda nezvedu. Saka, kana iwe uri mumwe weavo vanoedza nemhando dzakasiyana dzemagadzirirwo uye mavara, yave nguva yekutaura nezve manicure set. Unoziva here kuti chimwe nechimwe chezvishandiso zvayo ndechei?
Nekuti hakasi kekutanga kutenga a manicure set uye isu tinofunga kuti hazvisi zvese zvatichawana mutambo wakafanana. Saka tisati tasvika pamberi pedu pachedu, nguva dzose zviri nani kuziva kuti chimwe nechimwe chezvidimbu zvachinoumbwa nacho chichashandiswa nei uye zvechokwadi kubva ipapo zvichienda mberi tichakwanisa kunakidzwa zvakapetwa kaviri.
1 Manicure set: mbambo yembambo
2 The cuticle pusher tool
3 Cuticle nippers uye chigero
4 zvipikiri nippers
5 fur banga
6 Zvishandiso zvakasanganiswa
Manicure set: mbambo yembambo
Chimwe chezvishandiso chatinowanzo kuwana mune yega manicure seti ndeichi. Iine chimiro chetriangular kumusoro uye ichokwadi kuti hatizivi nguva dzose kuti ndeyei, asi tichakuudza kuti ndeyekuchenesa mbambo. Nekuti mushure mekucheka kana kuaisa, imwe tsvina inogona kuungana pasi pawo uye chishandiso ichi chine nzira yakakwana yekuchibvisa. Unoishandisa kakawanda here?
The cuticle pusher tool
Nokuti hatifaniri kugara tichicheka cuticles yezvipikiri. Pane nguva zhinji patakaenda kunotora manicure uye tinoona kuti nzvimbo dzerunako dzine mudziyo wekusunda cuticle usina kuibvisa. Kuti uite izvi, unoda chimbo chine spatula kana spoon chimiro, chakakomberedzwa kumusoro. Saka iyo cuticle ichabviswa, kunyanya kana nzvimbo iyi yakaoma. Iye zvino ichava nguva yekutanga nemanicure yedu pachayo!
Cuticle nippers uye chigero
Zvakare kune cuticles tichava nemidziyo miviri mikuru. Kune rumwe rutivi, zvigero, izvo zvichange zviri izvo zvakapinza uye zvakanakisisa mazano, pamwe chete nekuguma kwakakombama. Ehe, nekuvaona chete, isu tichatoona mutsauko nekajairwa chigero. Nekuti idzi dzakatetepa saka dzinoitirwa kungocheka cuticles. Nepo mapikisi anoitawo basa rimwechete sechigero, asi ane mupendero wakapinza kukwanisa kucheka ganda rakati.
Hongu, kana tichitaura nezve cuticle nipper, hatidi kuti ma nail nipper asare kumashure. Izvo zvakakwana kuti zvikwanise kucheka uye zvakare kugadzira zvipikiri. Asi zvakagadzirirwa zvipikiri zviya zvakakora, pamaoko netsoka. Saka, kuitira kuti urege kukuvadza nzvimbo inofanirwa kurapwa, yeuka kuti inoshandiswa chete munyaya iyi kana pane denser mbambo-yakaita nzvimbo isingagoni kutemwa nechigero.
Pane chimwe chishandiso chatinogona kusashandisa zvakanyanya, kunyangwe mune dzimwe nguva chichava chakakosha. Kana isu tine ganda rakati dhuu kubva panzvimbo yezvipikiri, isu tichashandisa banga iri. Kunyange zvazvo isina kuumbwa sebanga sezvatinoiziva. Ndezve musoro une chisvo chakatsetseka, chakaita sekamuzinga. Nekungoipfuudza, tinenge tichibvisa iwo matehwe akatovharirwa, pasina dambudziko rakawanda. Dzimwe nguva, mukati memanicure set tinowana imwe yakafanana asi iyo ine 'V' chimiro. Ose ane basa rimwechete.
Dzimwe nguva tinoonawo sei mudziyo mumwe chete une misoro miviri, panzvimbo pomumwe chete. Asi hapana chekushamisika nazvo nekuti ichange iine chinangwa chakafanana nezvimwe zvatanga tichitaura nezvazvo. Ndiko kuti, panogona kunge kune imwe inochenesa zvipikiri uye inosundira cuticles panguva imwe chete. Saka neichi chiridzwa chimwe chete, tinogona kuita mabasa maviri kamwechete.
Izvo zvinoenda pasina kutaura kuti mafaera ezvipikiri achaonekwawo mune manicure set, iyo isu tese tinoziva zvakanaka, pamwe ne tweezers uye kunyange mbambo clippers.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Manicure set - Chii chimwe nechimwe chinhu chei?